ဟောလိဝုဒ် Mirrors ကတော့
က Wall ကြေးမုံ
မီးသီး & အခြား
အလင်းများနှင့်အတူဟောလိဝုဒ် Vanity ကြေးမုံ, စတိုင်မိတ်ကပ် Mirrors ကတော့, tabletop သို့မဟုတ်အမှတ်တရတပ်ဆင်ထား
ဟောလိဝုဒ်အနတ္တ Mirror အလင်းနှင့်
အဆိုပါ BEAUTME ဟောလိဝုဒ် Vanity ကြေးမုံခေတ်သစ်အနတ္တအတှေ့အကွုံ-တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပါးလွှာများနှင့်ချောမွေ့ပြောင်လက်သေးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဒီဇိုင်းကိုပင်အလင်းရောင်နှင့်သာလွန်မှန်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှင်းလင်းပြတ်သားသည်။ ကြောင်းစုံလင်သော Instagram ကို selfie တာမိတ်ကပ်မဆို setting ကိုမှာလျှောက်လွှာ, အိမ်မှာသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်-လည်းများအတွက်စံပြ!
tabletop / WALL Mirror တပ်ဆင်ထား
Using- 1 နှစျယောကျအမျိုးအစားများ) စားပွဲပေါ်မိတ်ကပ်မှန်ထားပါ; 2) Hang thewall အပေါ်မိုင် rror
အလင်းများနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် Vanity ကြေးမုံပိုကောင်းရိပ်၏ဒီဂရီဆုပ်ကိုင်ခြင်းငှါ, နေ့၏အလင်းမှအလင်းကိုပိတ်ပွဲကိုရွေးချယ်ပါ။ အရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံဘောင်များကို လုပ်. , ခိုင်မာတဲ့အစိုင်အခဲများနှင့် tinplate သတ္တုဘောင်များနှင့်အခြေခံ varnished ကစားပွဲပေါ်တွင်ကြံ့ခိုင်နေဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ရတဲ့အရာတွေချောမွေ့စွာ splicing ဘောင်မှန်ကိုပိုမိုမြင့်မားသောတန်းများနှင့်လှပသောစေသည်။
လျှပ်စစ်မီး, ဖက်ရှင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Save လုပ်ရန်။
ပူနွေးသောအလင်း / နေ့အလင်းကိုချွတ်အပေါ် / အလှည့်လှည့်မှပေါ့ပေါ့တန်တန် 1. Touch ကို။
ယခင်: Makeup Mirror with Lights, Lighted Vanity Mirror, Table Top Lighted Beauty Mirror
နောက်တစ်ခု: Lighted Vanity Mirror with LED UV Nail,Tabletop Beauty Mirror
Power: 100-240V, DC12V / 1A Plug-in adapter
LED မီးလုံးအရောင်: နွေးအဝါရောင်အလင်း (3200k) & အဖြူနေ့ကအလင်း (6500k)
Glass ကိုအရွယ်အစား: 598mm (L ကို) * 498mm (H ကို) (23.54 "* 19,6");
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 600mm (L ကို) * 180mm (W) * 530mm (H) /23.62 "* 7,08" * 20,86 ";
ကြေးမုံအလေးချိန်: 5kg အကြောင်းကို
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: EPE မြှုပ် + Box ကိုပက်ကေ့
ဟောလိဝုဒ် Vanity ကြေးမုံ
ဟောလိဝုဒ် Vanity ကြေးမုံနှင့်အတူအလင်းများ
အကြီးစား Size ကိုဟောလိဝုဒ် Vanity ကြေးမုံ
အကြီးစားဟောလိဝုဒ် Vanity ကြေးမုံ, tabletop သို့မဟုတ်အမှတ်တရ ...
9 L ကိုအတူအနတ္တ tabletop အလင်းမိတ်ကပ်ကြေးမုံ ...
နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် Facebook ပေါ်မှာအောက်ပါအတိုင်း @Beautmeclub
ဆက်သွယ်ရန် & အကူအညီ
ပိုမိုသိရှိလိုပါကလိုအပ်ပါသလား? BEAUTME ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကိစ္စများဖြေရှင်းရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
© 2010-2020 BEAUTME ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ ၊ မြေပုံအညွှန်း ၊ amp မိုဘိုင်း
Vanity အလင်းမီးသီး , မိတ်ကပ်ကြေးမုံနှင့်အတူအလင်းမီးသီး, အချည်းနှီးသောကြေးမုံနှင့်အတူအလင်းမီးသီး, ကြေးမုံနှင့်အတူအလင်းမီးသီး ၊